HomeWararka CiyaarahaSolskjaer oo ka hadlay xiriirka ka dhaxeeya Ronaldo iyo Fernandes ee dhanka kubada Garoonka
September 20, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku faraxsan xiriirka sii kordhaya ee Bruno Fernandes iyo Cristiano Ronaldo .
Labaduba si fiican bay isu yaqaaniin waajibaadkooda dhinaca qaranka Portugal.
Qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa walaac ka muujiyay iswaafajintooda, maadaama Fernandes uu inta badan muujiyo qaab ciyaareed wanaagsan United, laakiin labadooduba waxay durba isku xireen inay saameyn heer sare ah ku yeeshaan heer kooxeed.
Fernandes ayaa bixiyay baaskii aakhirkii keenay in Ronaldo uu gool ka dhaliyo West Ham United kulankii ay 2-1 kaga badiyeen Premier League axadii.
Solskjaer ayaa u sheegay website -ka kooxda: “Labadooda [Ronaldo iyo Fernandes], dabcan, waa inay wada shaqeeyaan.
“Waxay u wada ciyaareen Portugal muddo yar laakiin, aniga ahaan, kuwani waa ciyaartoy sarre waana ku faraxsanahay.